Amabinzana kadadewenu ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kuba usisi ungaphezulu komhlobo, ngumntu ohamba nawe bonke ubomi bakho, ukusukela ebusaneni ukuya ebudaleni. Kweli phepha uyakufumana ingqokelela yezona ngcinga zintle zokuzinikezela kuloo mntu ubalulekileyo ebomini bakho, udade wakho. Ngenxa yokuba udadewenu ufuna ukuba umkhumbuze ukuba umthanda kangakanani, ngala mabinzana mahle kadade wakho ungamxelela ngeyona ndlela ifanelekileyo.
1 Amagama kudade wakho
2 Amabinzana amafutshane kasisi wam
3 Amabinzana athi dade okhethekileyo
4 Oodade amabinzana amanyeneyo
5 Amabinzana evidiyo zakho zodade
Ndiyakuthanda dade. Ndiyazi ukuba nawe, ndithathe izinto ezininzi kuwe ndingakhange ndicele mvume yakho kwaye ndizitshabalalisile kwaye awuzange undiqumbele. Nangona ndenze izinto ezimbi, usandithanda, kodwa ndikuthanda ngakumbi, ungumzekelo ebomini bam, dade wethu.
Siza kuhlala sikunye, singaphezulu kakhulu kubahlobo, asinamibandela, singaphezulu kwabantwana, baya kushiya ixesha elithile kodwa siya kuhlala simanyene ngonaphakade.
Dade, nangona ubomi busisa kumacala ahlukeneyo ngokungathi singamasebe omthi. Kodwa siyakuhlala sabelana ngengcambu enye, ingcambu yethu luthando olukhulu esinalo omnye komnye kwaye sabelana ngalo ngenxa yabazali bethu.
Nanini na xa ndisecaleni kwakho, dade wethu, undenza ndibuva ubushushu balo lonke uthando lwakho ngam, iingalo zakho zindiwola zindinika ukufudumala xa ndifuna kakhulu. Ndiyazi ukuba ndingathembela kuwe kwaye ndifuna wazi ukuba ndiya kuhlala ndikho apho undifuna khona.
Ukuba nodade onjengawe yeyona nto intle ebomini, umntu osecaleni kwam kwelona xesha lilungileyo lolonwabo kwaye ongaze andishiye ngamaxesha akrakra osizi.
Ukubandezeleka bendihlala ndinyamalala namava akho njengodade omkhulu kunye namazwi akho amnandi.
Amabinzana amafutshane kasisi wam
Dade omncinci, ndiyayixabisa into yokuba usebenza nam, kuba indenza ndifune ukwenza ngaphezulu kokucwangcisiweyo. Ndikuthanda ngaphezu kokuba ucinga.
Usisi wam ulunge kakhulu, ungoyena ubalaseleyo, andazi ukuba ngekhe kwenzeke ntoni kum, ukuba ubungekho ecaleni kwam. Ndinetyala elikhulu lezinto ezininzi, ndixolele ukuba ngamanye amaxesha ndikhe ndakukhanyela izilungiso zakho, ndiyazi kuphela ukuba ndiyakuthanda ngokungathi ungumama.
Ukuzalwa kwam, wawusele ukhona, kwaye ke ndiyabulela kuThixo ngokundibeka ecaleni kwakho ukuba sabelane ngalo lonke uthando lwethu nokuzithemba kwethu. Ndikuthanda kakhulu, dade wethu endimthandayo.
Umxholo wethu womelele kangangokuba asinakuze sahlukane emphefumlweni. Akusayi kubakho zilwandle eziliwaka ezahlulayo, kuba uthando esinalo omnye ngomnye lukhulu kwaye lomelele ngaphezu kwawo nawuphi na umoya ovuthuzayo ozama ukusahlula.
Ndonwabile ukuba nawe njengodadewethu othandekayo, okwangumlingane wam kunye nomhlobo wam othandekayo. Andazi ukuba ngendikwenzeni ukuba ubungekho apha, ndikuthanda kakhulu.
Amabinzana athi dade okhethekileyo
Jonga ukuba mingaphi iminyaka edlulileyo, dade wethu mhle, kodwa sisahlekisa nje, singasekho sikrwada, kodwa xa sidibana siba namandla. Ndikuthanda kakhulu.
Nangona sithathe iindlela ezahlukeneyo, uthando lwethu lodade alunakuze lucinywe. Ndihlala ndikhumbula ukuba abazali bethu bafaka kuthi ubudlelwane phakathi koodade, yinto endizakuyiphatha ngaphakathi entliziyweni nasemphefumlweni wam. Ndiyakuthanda
Khange ndikwazi ukuzihlukanisa nawe, ukuba siyalwa, ndiyazi ukuba iyakuba yeyethutyana, kodwa andizukuvumela nantoni na ukuba isiphambanise neemvakalelo zethu zodade. Ndiyabona ukuba abanye oodade abavani kwaye bahlala bodwa, ngokungathi ngabantu basemzini, kwaye ndiyathemba ukuba asisoze savana. Ndikuthanda kakhulu, dade omhle.
Oodade amabinzana amanyeneyo
Ndiziva ndonwabile ukuba ungudade wethu, amava amaninzi esiye sanalo, uninzi lwabelana ngovuyo, ndiyakuthanda kakhulu dade kwaye andifuni kulahlekelwa nguwe.
Akukho namnye onjengawe ondivayo, dade, kuba ukongeza ekubeni sinegazi elinye, singabahlobo abalungileyo abaninzi abangathanda ukuba ngabo, uyazi ukuba ungoyena mntu ndimthanda kakhulu, ndikuthanda kakhulu, njengokuba nam undithanda.
Ndiyabulela ngokundivuyisa xa ndikwimeko yoxinzelelo, eya kuba yeyam ukuba bendingenayo. Ndiyakuthanda ukuba unobuntu obonwabileyo nobusulelayo, uyandonwabisa.
Ndiyabulela kuThixo ngokuba nodade onjengawe, ozinikele kakhulu kum, enkosi ngokundinika uthando lukamama nangokuhlala endicebisa, ngaphandle kokwahluka kwethu, uthando endiva ngalo ngani infinito.
Nangona sehlukene iminyaka eliqela, kum ungoyena mhlobo usenyongweni, kuba uhlala usecaleni kwam, ke nam ndiziva ngathi undithanda kakhulu, dade omncinci mhle.
Awuyi kubakho umgama owahlula thina dade entliziyweni yam, iimvakalelo zethu zikhulu kakhulu kwaye ubomi bethu buya kuqhubeka buzele luthando. Ukuba ngenye imini kufuneka simke ngenxa yezizathu zangaphandle, siyakuhlala simanyene, ziinkumbulo ezintle esinazo nothando lwethu olungenakwahlulwa.
Udade oxabisekileyo, sasikhona, kwaye siza kuba ngonaphakade oodade, abazithembileyo, abahlobo abasenyongweni, kuba ndiziva ngathi uThixo usisikelele ngokusidibanisa. Ndiyakuthanda kakhulu.
Ngaphandle kweminyaka, ndiziva ngathi ndingumntwana xa sikunye, sihleka zonke izinto ezingenangqondo esasizenza. Siye sabelana ngezihlandlo ezintle esizikhumbulayo ngoku ngovuyo olukhulu.
Siya kuhlala sisondele kunanini na ngaphambili, nangona ubomi busithathile kwiindlela ezahlukeneyo, oloyisayo luthando esinalo omnye ngomnye, iinkumbulo ezintle zobuntwana bethu nothando lwabazali bethu.
Amabinzana evidiyo zakho zodade